12th May, 2021 Wed १२:०६:५२ मा प्रकाशित
महन्त जीकै कारण निरङ्कुश, सर्वसत्तावाद सोच भएको व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने काम भयो । यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसदबाट विश्वासको मत नपाएपछि अर्को विकल्प खोज्नु पर्छ । नयाँ सरकार बन्नु पर्छ । तर, वैकल्पिक शक्तिको रुपमा उदाएको हाम्रो पार्टीभित्र सत्ता समिकरणलाई लिएर समस्या उत्पन्न भएको छ । देशको राजनीति अस्तव्यस्त रहेसंगै पार्टीमा पनि विग्रह शुरु भएको छ । पहिला मिल्नु पर्छ भनेर रातारात पार्टी एकता गरे अहिले तिनै नेताहरु पार्टी फुटाउन लागि परेका छन् ।
अहिलेको अवस्थामा हाम्रो पार्टीले संस्थागत निर्णय नगरी राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुने अवस्था छैन । हाम्रै पार्टीको कारणले फेरी पनि ओलीकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार नबन्ला भन्न सकिदैन । यदि ओलीकै नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्यो भने पनि संसदबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन ।
हाम्रो पार्टीले ओलीको विकल्प खोज्नु पर्छ । नयाँ सरकार बनाउन सहयोग गर्नुपर्छ । संसदलाई बन्दी बनाएर राख्ने होे सांसदको के औचित्य रह्यो ? त्यसैले हामी असफल भइसकेको ओली नेतृत्वको सरकारको पक्षमा छैनौं । यो विषयमा पार्टीको बैठक बस्नु पथ्र्यो तर बस्न सकेको छैन । निर्णय पनि केही गर्दैनन् । दुई अध्यक्षमात्र पार्टी होइन । तत्काल कार्य समितको बैठक बोलाएर राजनीति निकास दिनुपर्छ । भए सर्वसम्वत नभए बहुमतबाट निर्णय गर्नुपर्छ । एउटा अध्यक्ष एकातिर अर्को अध्यक्ष अर्कोतिर यो त राम्रो भएन नि । कार्यसमितको बैठकले जे निर्णय गर्छ त्यो मान्नुपर्छ ।
महन्त ठाकुर एक्लै गएर केपीसंग वार्ता गर्ने पार्टीलाई केही पनि जानकारी नहुने । एक्लै सुटुक्क बालुवाटार गएर प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने अनि के के सहमति गर्ने त्यो सहमति मान्नुपर्ने । पार्टीको बैठक बोलाउनु पर्दैन । महन्त जी कै कारण लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसद शहीद भए । त्यो जिम्मेवारी लिनु पर्दैन । बाहिर सत्ता चाहिदैन भन्ने बालुवाटार गएर सत्ताको बार्गेनिङ गर्ने । त्यसैले मुलुकलाई भड्खालोमा हाल्ने र पार्टीभित्र भाँडभैलो गर्ने महन्त ठाकुर हो ।
ठाकुर जी ले बुझ्नु पर्ने हो ओली जीले पार्टीको निर्णय नमान्दा दुई तिहाइको सत्ता कसरी ढल्यो ? अहिले पार्टीनै सिद्धिने अवस्थामा पुगेको छ । आफ्ना पार्टी मिलाउन नसक्ने नेतासँग हाम्रा अध्यक्ष ठाकुरको संगत भयो । त्यसले पार्टीभित्र विग्रह शुरुभयो । पार्टीको बैठक पनि नबोलाउने , आफुलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने यो त भएन नि । पार्टीलाई जानकारी नदिइ लुसुलुसु बालुवाटार जाने, वार्ता समिति बनाउने यस्तो पनि तरिका हुन्छ ? पार्टी एकीकरण भएपछि अहिलेसम्म एउटा पनि बैठक बसेको छैन । देशको वैकल्पिक शक्तिकोरुपमा उदाएको पार्टी नेताको कारण ध्वस्त हुने अवस्थामा पुग्यो ।
तत्काल पार्टीको कार्यसमितको बैठक बोलाएर भए सर्वसम्वत नभए बहुमतको आधारमा निर्णय गरेर मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । ओलीलाई विस्तापित गरेर नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले वैकल्पिक सरकार बनाउन एकमतले समहयोग गर्नुपर्छ । संख्या पुगेन भने अल्पमतको सरकार ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । वर्तमान प्रधानमन्त्रीमाथि संसदको विश्वास नै नभएपछि विकल्पमा अर्को सरकार बनाउनु पर्छ । महन्त जीकै कारण निरङ्कुश, सर्वसत्तावाद सोच भएको व्यक्तिलाई प्रोत्साहन दिने काम भयो । यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ ।
(यादव जसपाका नेता हुनुहुन्छ)